ဟင်းလင်းပြင်: December 2007
Posted by HinLinPyin at 23:490comments
Posted by HinLinPyin at 23:340comments
Posted by HinLinPyin at 08:00 1 comments
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ (ဂျူးလိယက်ဖူးချစ်)
Posted by HinLinPyin at 17:180comments
မောင်မောင် ဆိုရင် တော်ပါပြီ ။ သံဃာ နဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမူကြီးကို သူလုပ်တာ ဆို ပါလား
Rest of your postFriday, 14 December 2
Leading Burmese activists this week disputed claims by exiled politician and labor activist Maung Maung that he trained people to participate in the September uprising.Maung Maung,acontroversial politician in exile, was quoted in The Washington Post, on December 4, "We had about 200 people inside the country trained to take pictures with digital and video cameras. We also trained them to transmit using satellite phones and Internet cafes. They were on the front lines when the demonstrations started.”
"We want money for Sat phones, for digital cameras, for typewriters for the monks, for bicycles. We need it now"—Maung Maung
"We want money for Sat phones, for digital cameras, for typewriters for the monks, for bicycles। We need it now," he told the Post.However, many pro-democracy opposition groups inside and outside Burma strongly disputed Maung Maung's claims and are critical of his unsubstantiated comments.U Sila Nanda,aleading monk during the September uprising who arrived on the Thai-Burmese border recently, said independent monks led the mass protests and no exiled politicians were behind the uprising.
On December3in press conference in Naypyidaw, the Burmese junta's Police Director Brig-Gen Khin Yi alleged that exiled Burmese opposition groups and politicians were the masterminds behind the planning and organizing of the pro-democracy uprising.
U Sila Nanda said the junta’s claim in the press conference that Maung Maung, also known as Pyi Thit Nyunt Wai, playedaleadership role in the uprising was U Sila Nanda said the junta’s claim in the press conference that Maung Maung, also known as Pyi Thit Nyunt Wai, playedaleadership role in the uprising was false।Maung Maung is also secretary of The Federation of Trade Unions—Burma (FTUB). On Thursday, he was in Washington, DC, withaBurmese delegation lobbying for funds to aid opposition groups.
“The exiled politician [Maung Maung] was not related to the monks in Burma during the uprising,” said U Sila Nanda.
“The monks in Burma are clearly free from any exiled organization. If any politicians tried to control the monks, we [monks] would not accept it.
"If they want credit for the monk-led demonstrations, then they should cooperate with the monks,” he said.
Tun Myint Aung,aleader of the 88 Generation Students group who is in hiding, told The Irrawaddy this week that exiled politicians and activists should speak carefully about the causes behind the demonstrations.
“This kind of talk can split the pro-democracy movement," he said. "It can also make more risky situations for activists inside Burma. It is counterproductive.
"Nobody, including the 88 group, systematically prepare for the movement. It happened naturally through the people’s momentum.
“On August 19, we marched in Rangoon. But we did not prepare for that march. We immediately decided to march because of the Burmese people’s poor situation after the fuel price hike by the junta.”
Bo Kyi, the joint secretary of the Assistance Association for Political Prisoners (Burma), said all anti-junta protests were originated by people inside Burma who suffer under the military rules.
“Exiled politicians should not say that it was their work," he said.
All the junta's accusations were false, he said.
"No one gave money to people to join the protests. Hundreds of thousands of people decided to join the protests for democracy and their future,” he said.
Naing Aung, the secretary-general of the Forum for Democracy in Burma, said most protesters were independent monks, young people and students who were not connected to exiled groups such as the FDB or FTUB.
He was critical of exiled leaders who claim ties to groups inside Burma, also saying it could make trouble for pro-democracy activists.
Both Bo Kyi and Naing Aung were named by Brig-Gen Khin Yi as masterminds behind the scene of the September uprising.
A former political prisoner in Mae Sot also disputed statements made by Maung Maung, who, duringameeting on the border during the uprising, said members of his trade union organization would join the uprising.
"But none of his men joined the September movement,” the activist said.
In the press conference in Naypyidaw, Police Director Brig-Gen Khin Yi alleged that systematic planning designed to topple the junta was done months before the uprising.
He claimed the main group behind the opposition was the FDB, which is based on the Thai-Burmese border.
Posted by HinLinPyin at 02:380comments
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ (ဂျူးလီယက်ဖူးချစ်) အခဏ်း (၁)
Posted by HinLinPyin at 01:530comments
Posted by HinLinPyin at 19:170comments
စက်တင်ဘာ ၂၇၊ သံဃာအရေးတော်ပုံတွင် မန္တလေးရှိ စစ်တပ်က
အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သည့် သက်သေခံ ဓာတ်ပုံများ ထွက်ရှိလာပြီ
လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများကို လမ်းမများပေါ်တွင် ရိုက်နှက်ခြင်း နှင့် စီးနင်းလာသော ဆိုင်ကယ်အား သိမ်းဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပြည်တွင်းရှိ မန္တလေး လူကြုံများမှတဆင့် ရရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်းတွင် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ခဲ့သမျှ သက်သေများ ပေါ်ထွက် လာနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by HinLinPyin at 05:490comments
Posted by HinLinPyin at 20:370comments
မနေ့ညနေခင်းနှောင်ပိုင်းတုံးက ကျနော်နှင်းဆီဖြူ တပွင့်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ လူတွေကပြော နေကြ တယ်၊ နှင်းဆီဖြူတွေဆိုတာ သေခြင်းတရားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရာပါတဲ့၊ တကယ်တော့ဗျာ၊ သေခြင်းတရားရယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ်၊ နုပျိုမှုဆိုတာတွေရယ်ဟာ တခုတည်းပါ၊ သေခြင်း တရားဆိုတာက ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုထက်၊ အမြဲတန်းရှင်းလင်းတောက်ပနေတဲ့သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အရာမို့လား၊ ဆိုတော့ နှင်းဆီဖြူဆိုတာ သူရဲ့သင်းရနံ့တွေနဲ့၊ နူးညံ့အပြစ်ကင်း ဖြူစင်မှုတွေနဲ့ ထာဝရနုပျိုနေမှုကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်နေတယ်၊
Posted by HinLinPyin at 01:130comments
အင်္ဂလိပ်လိုနေရှင်နယ်ဒေး ဗမာလိုအမျိုးသားနေ့ဆိုတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ ကိုဖော်ကြူးတယ်လို့ယူဆကြတဲ့နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ကြတတ်တယ်။ တရုတ်အမျိုးသားနေ့ဆို တာ ပီအာစီလို့ အင်္ဂလိပ်လိုသိကြတဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်တဲ့နေ့၊ အမေရိ ကန်တွေအတွက်ကျတော့ သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာ အမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပြန်ရော။ နောက် တခါ ပြင်သစ်တွေအတွက်ကျတော့ ပြင်သစ်တွေရဲ့ သုံးရောင်ခြယ်အလံမှာ ဖော်ကြူးနေတဲ့ liberty/ equality၊ နောက် fraternity ဆိုတဲ့လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ ညီရင်းအကိုစိတ် ဓာတ်ရှိမှုတွေက အကြွင်းမဲ့ဘုရင်စံနစ်ပေါ် အနိုင်ရလိုက်တဲ့နေ့။ ဘုရင်မနှစ်သက်တဲ့စာတွေရေး တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဖမ်းထားလေ့ရှိတဲ့ ဘာစတီးအကျဉ်းထောင်ကို ၀င်စီးတဲ့နေ့။ တနည်းအားဖြင့်
အကြွင်းမဲ့စနစ်နဲ့အုပ်စိုးမှုကို မခံနိုင်လွန်းလို့သူပုန်ထတဲ့နေ့ပဲ။ အဲဒီနေ့ ကနေ့ ပြည်သူတွေရဲ့တောင့်တချက်တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမဲ့ ပြင်သစ်ပြည်ကြီးမွေးဖွားလာတယ်လို့ ပြင်သစ်တွေကယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ဘာစတီးနေ့ဟာပြင်သစ်တွေရဲ့ အမျိုးသားနေ့ဖြစ်လာ တယ်။ မြန်မာပြည်အတွက်တော့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ပညာရေးစနစ် ကိုစဘွိုင်းကောက်လုပ်တဲ့နေ့။ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ရယ် ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာသတ်မှတ် လာကြတဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ဆယ်ရက်နေ့ပဲ။ ဆိုတော့ ဒီနေ့ဟာအမျိုးသားရေး လက္ခဏာ ဘယ်လိုဆောင်သလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်။ အမျိုးသားနေ့ကို ကောလိပ်ကျောင်း သားတွေ စသပိတ်မှောက်တဲ့နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ဘို့ စအဆိုပြုတာ နေရှင်နယ်ဦးမြင့် လို့သိကြ တဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ကိုယ်စားလှယ် ကိုမြင့်ပဲ၁။ အဲဒါပေမဲ့ တို့မြန်မာတွေမှာ နေရှင်နယ် ဒေး၊ အမျိုးသားနေ့ရယ်ဆိုပြီး ရှိသင့်တယ်လို့ အဆိုသွင်းတာကတော့ န၀မအကြိမ် ဂျီစီဘီအေ အစည်းအဝေးမှာ ကန်ကြီးထောင့်က ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က အဆိုတင်သွင်းတာဖြစ် တယ်၊ အဲဒိမှာတချို့ကလဲ သီပေါဘုရင်နန်းကျတဲ့နေ့၊ တချို့ကလဲ ဦးဥတ္တမထောင်ကျတဲ့နေ့ကို သတ်မှတ်ရင်ကောင်းမယ် စသဖြင့်တင်ပြကြတယ်၊ အဲဒိမှာ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် ကိုမြင့် က ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ သပိတ်မှောက်တဲ့နေ့ဟာဖြင့် ပိုသင့်တော်တယ်ဆိုပြီး အကြံပြု တာဖြစ်တယ်။ သူရဲ့ ကြောင်းကျိုးပြဆိုချက်က မှတ်သားစရာကောင်းတယ်၊ ‘ယူနီဘာစတီ အက် ဥပဒေကို သပိတ်မှောက်တဲ့ကိစ္စဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် အင်္ဂလိပ်သြဇာအာဏာဥပဒေ ကို ပဌမဆုံးတော်လှန်ပုန်ကန်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်၊ တနိုင်ငံလုံးကိုနိုးကြားထကြွသတိရပြီး ၀ံသာ နုရိက္ခိတတရားထွန်းကားလာပါတယ်’ တဲ့၊၂
Posted by HinLinPyin at 01:080comments
“သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကြီးပြီးလို့ တန်ဆောင်မုန်းတန်ဆောင်တိုင် ဆီမီးကမြိုင်။ မသိုး အလှ မြတ်သင်္ကန်းကပ်ဖို့။ ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော်ပေါ်မှာပြိုင်”ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလိုအချိန်မှာကြားရလေ့ရှိတဲ့ ကိုမြကြီးရဲ့သီချင်းလေး ကိုမှတ်မိတယ် မဟုတ်လားဗျာ၊ ရန်ကုန် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်။ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံနဲ့ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ၊ ရက်ရောလှ တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေ၊ ခွဲလို့ရနိုင်ရိုးလားဗျာ၊ အခုတော့ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ကို သံဃာတော်တွေဟာ ခွင်ပြုချက်လက်မှတ်နဲ့ တက် ရသတဲ့။ ဘုရားဖူးကြည်ညိုသူတွေ လူစုလူ ဝေးနဲ့ မတက်ရဘူးတဲ့၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်ထက်ဆိုးတဲ့ ကာလတခုကို ရောက်နေပါပေါ့ လားဗျာ။
သံဃာတော်တွေကို ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေ မောင်းထုတ်။ ပြန်ခိုင်း။ သာသနာ့စောင်းထက် နအဖစောင်းက ပိုထက်တယ်လို့ ပြောဖို့လုပ်နေတဲ့ ကာလ ကြီးမှာ ကျနော်ဖြင့်ဗမာပြည်က ကထိန် အလှူပွဲတော်များအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မိတာ အမှန်ပါပဲ၊ ဒီကနေ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ကထိန်ပွဲကြီးတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင်းပပြီး လမ်းတကာ၊ ရပ်တကာ မှာ ကထိန်ညှပ်ကြီးတွေ အပြိုင်အဆိုင်ဆင်ယင်။ ခင်းကျင်းကြ။ ပွဲတွေလမ်းတွေ ကျင်းပကြ။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် (ကာတွန်း)ဦဘဂျမ်းလမ်းမှာ ကာတွန်းပြပွဲတွေလုပ်ကြ။ မန္တလေးဘက်မှာဆို ရင် စစ်ကိုင်းတောင် တောင်လုံးညွှတ်မျှကထိန်သွားခင်းကြ။ ဈေးချိုထဲက အေရုံ၊ ဘီရုံ စတာ ကြီးတွေက အငြိမ့်တွေပွဲတွေနဲ့ နေ့ခင်းကြီးဧည့်ခံကြ။ ဒီလိုချစ်စရာ။ ဂုဏ်ယူစရာအစဉ် အလာ လေးတွေဟာ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့စစ်မိန့်တွေကြောင့် ပျောက်ကုန်တော့မှာပါလားဗျာ။
ကျနော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားများဟာ ကိုယ့်မှာရှိရင် ကိုယ်ချည်းမစားသုံးပဲ သူများကိုလည်း ပေးကမ်းဝေမျှချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ် စေတသိက်လေးရှိနေတော့ စပါးသိမ်း။ ပဲသိမ်းပြီးရင် လှူကြ တန်းကြတာဟာ နှစ်ထောင်နဲ့တောင်ရှိပြီနဲ့ တူပါတယ်ဗျာ၊ ဘယ်သူကမှ ရိုက်ခိုင်းဖို့မလို။ အမိန့် ပေးခိုင်းဖို့မလိုတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းပါ၊ မင်းမှ စိုးမှ လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်းရဲသားလဲ တတ်နိုင်ရင် တတ် နိုင်သလောက်လှူကြတမ်းကြတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေပါဗျာ၊ အခုတော့ လှူချင်လို့မလှူရ။ လှူချင်သူကိုမလှူရ။ ၀ဋ်ဒုက္ခတမျိုးလိုပါပဲ။
ဒီကြားထဲမှာ နအဖအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ယန္တရားများနဲ့ နောက်လိုက်ခွေး မီဒီယာများထဲမှာ သူတို့လက်ပါးစေ ကြံ့ဖွတ်တွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုသွားပြီး ကထိန်ပစ္စည်းတွေအတင်း လက်ခံခိုင်း။ အတင်းရေစက်ချ။ အတင်းကထိန်လိုက်ခင်းနေကြတယ်လို့ ကြားရတော့ ပိုပြီးစိတ် မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်၊ အေးဓားပြတိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းပြန် ကုသိုလ်ဓားပြတိုက်တယ် လို့ ဆိုရမလား မသိပါဘူး၊ တချို့သံဃာတော်များကတော့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ထား တာမို့ သူတို့ပေးတဲ့အခါ လက်ခံထားလိုက်ပေမဲ့ သူတို့သွားတဲ့နောက် ကိုယ်တိုင်မသုံးပဲ သူများကိုစွန့် ကြဲလိုက်ကြတယ်လို့လဲ ကြားရတယ်၊ နအဖကြောင့်မို့ သံဃာတော်များလုပ် နေရပုံအတွက် လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အလှူဒါနဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် အချက်သုံးချက်လိုအပ် တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား၊ အဲဒါတွေက လှူတဲ့သူရယ်၊ လှူတဲ့ပစ္စည်းရယ်၊ အလှူခံတဲ့လူရယ်လို့ ဆိုသမို့လား၊ အခုတော့ သံဃာတော်များကလက်မခံချင်တာကို အာဏာ နဲ့ အတင်းယူခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ အလှူဒါနဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာဟာ စစ်တပ် အာဏာအပါ အချက်လေးချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ၊ မူလသုံးချက်နဲ့တင် မရတော့တာလည်း အမှန်ပဲ၊ စစ်အာဏာပိုင်တွေကခွင့်မပြုလို့ မခင်းရတဲ့ ကထိန်တွေ၊ မကျင်းပရတဲ့အလှူပွဲတွေ နည်းမှမ နည်းတော့ပဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာပြော ပြောရရင် ဒါနမမြောက်အောင် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး တယ်ဆိုတဲ့ အပြစ်ဟာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ စဉ်းစားမိရဲ့လားမသိဘူး။
ဒီစာကိုရေးနေရင်းပဲ ကိုဟိုဒင်းရေ။ သတင်းတခုဝင်လာသဗျ၊ ကောင်းသတင်းပြော ရမ လား။ ဆိုးသတင်းပြောရမလားမသိဘူး၊ ခင်ဗျားမို့ မျှရအုန်းမယ်၊ အဲဒါ(ဦး)မြတ်ခိုင်ရဲ့ လျှပ်တစ် ပြက်ဂျာနယ်ပိတ်လိုက်ရပြီတဲ့ဗျ၊ ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်လိုက်တာလို့ ဆိုတာပဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ တော့ မသိရသေးဘူး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး (ဗိုလ်ကျော်ဆန်း) ကို ပိုင်လှတယ်ဆိုတဲ့လူ။ သူ လည်းကမ်းနားသစ်ပင်ပဲကိုး၊ ကိုယ့်ကိုယ်အမှီကောင်းရှိ။ အကာအကွယ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီး သူတကာကိုတွယ်။ စာပေအနုပညာသည်တွေကို တပည့်မွေး။ ရန်သူထား လုပ်ချင်သလိုလုပ် နေတဲ့လူရယ်လေဗျာ၊ နအဖကိုယ်စား တရားမ၀င်ဝါဒဖြန့်တာ။ တိုက်ခိုက်တာတွေလည်း လုပ်မှ လုပ်၊ လျှပ်တစ်ပြက်ဆိုတာက ဗမာပြည်ရဲ့နံပတ်ဝမ်း အ၀ါရောင်စာနယ်ဇင်းရယ်လို့ ဆိုင်းဘုတ် ချိတ်ဆွဲမထားယုံတမယ် နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ “အတွင်းရေး” ဆိုတဲ့ ကောလာဟာလတွေ ကိုဘုံးဘောလအော။ ရက်ရက်ရောရာကြီးဖော်ပြနေတဲ့ ဂျာနယ်ပါကလားဗျာ၊ သူနဲ့မတည့် လို့ကတော့ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ။ ဂီတလောကသားတွေ သွားပေရော့ပဲ၊ တယ်လဲပြောင် မြောက်ဆိုကိုးဗျ။
အရင်လတုန်းက ကျနော့်စာထဲမှာ သူ့ဂျာနယ်ကနေ နိုင်ငံရေးကျားသေတွေကို နအဖရဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ အသက်သွင်းလာတာကို ရေးလိုက်မိသေးတယ်မှတ်တယ်၊ ဦးအောင်ကြီး။ သခင် တင်မြ။ ဦးချစ်လှိုင်တို့သုံးဦးကို ခမ်းခမ်းနားနားကြီးပွဲထုတ်ပြီး အတိုက်အခံတွေကို တိုက်တာ လေဗျာ၊ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးလောကနဲ့ စာပေလောကမှာကို တော်တော်ပြောစရာဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့၊ အခုတော့သူများပျက်စီးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာတယ်လို့တော့ မပြောချင်ပါဘူးဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ‘လျှပ်တစ်ပြက်ဘာကြောင့် အပိတ်ခံ ရတာလဲ’ ဆိုတာလို ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ မရှင်း တာလေးတွေ ကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ပဲ အစာမကြေသလိုဖြစ်နေတာပါ၊ သူကမင်းသမီး တယောက်အကြောင်း ပုတ်ခတ်ရေးသားလို့ အဲဒီမင်းသမီးက ကြပ်ပြေးအထိတက်တိုင်တာနဲ့ အပိတ်ခံရသလိုလိုတော့ ကြားတာပဲ၊ ကြပ်ပြေးက အာဏာပိုင်များက မင်းသမီးလေး ကိုပိုစာ နာသွားတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ၊ အလွယ်သာမာန် အရပ်သားပြော ပြောရင်တော့ လည်လွန်းတဲ့ဘီး ချေးသင့်တာပါပဲ၊ အခုလိုအခါကြီးရက်ကြီးမှာ ဗမာပြည်သားတွေအဖို့ တရား သံဝေယူစရာ ဖြစ်တာပေါ့လေ။
Posted by HinLinPyin at 22:550comments
Posted by HinLinPyin at 08:500comments
မေတ္တာ … တရားလား
သစ္စာ .. တရားလား
ချစ်သဒ္ဓါ .. ပွားသလား
မုဒိတာ .. ထားမလား
လား .. လား .. မှ မထိုက်
သည်လူမိုက်တစု .. ကို။
ဘယ်သူနဲ့ဘယ်တုန်း .. က
အနိုင်ရခဲ့တဲ့ .. သာဓက
ချာချာလည်တာ .. တွေ့ခဲ့ဘူးပြီးပဲ။
ဒို့ … ရန် ငါ မပြတ်လို့
အတ္တထိမှာ … ကြောက်လို့လား
အနာဂါတ်အသိတွေ … ပျောက်လို့လား။
မသိရင် … ကြောက်တတ်ပါတယ်
သိရင်လျှောက် … ရပါတယ်
သဘာဝ “အပြော” ကို ပြင်စေဘို့ ..။
ဟော … သေနတ်ဆိုတာ…
“မျက်ကွယ်”လဲ … ယူ
တက် ဆုတ် ပြန်ပတ် …
ကျည်တကပ်ကုန်ရင် … ဒို့အလှည့်
ဆက်သွယ်ရေး .. လမ်းတွေ
သတင်းပေး .. သစ္စာဖေါက်တွေ
ရတာနဲ့ .. ခုခံ
အုတ်ခဲ .. ဓါး .. လှံ
ဂျင်ကလိ .. စပုတ်တံ
လေးဂွ .. ရရာ တော်လှန်ပေရော့။
ချေမှုန်းတဲ့စစ် ပြည်သူ့စစ် အစစ်ဆိုတာ .. ဒို့တတွေပါ
သူတို့နဲ့ ပြည်သူ.. ဘယ်သူကများသလဲ။
မင်းလားကွ .. စစ်သား
ပြည်သူစော်ကားတဲ့ .. ရဲ
ကြံ့ဖွတ်ငနဲနဲ့ .. စွမ်းအားရှင်.. မင်းတို့ .. ဘ၀င်တွေ .. မြင့်လွန်းတယ်။
ဒို့နှလုံးသားက .. သိမ်မွေ့ပါတယ်
ဒို့ဘက်ပါ နင်လာ .. ထား
နောင်များဆို .. ပြည်သူ့မေတ္တာ ဒဏ်သင့်လိမ့်။
မင်းလဲသိထား .. တာမို့။
ပြည်သူ့ “ကျည်ဆံ” နဲ့
သိပ် ညစ် ပတ် စုတ်ပဲ့
ယုတ်မာတဲ့ သူတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု
အပေါ်စီးကယူ “သတ်” “ပစ်” အမိန့်တွေပေးနေတယ်။
မင်းသိပ်မိုက်နေလား .. မင်းသိပ်ခိုက်နေပြီးလား ..
မင်းသိပ် ချမ်းသာ နေပြီးလား။
မင်းလဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာက ..။
နိုင်တဲ့သူက .. ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တွေပါပဲ။
ဇီးရိုး .. ဆိုတဲ့
Posted by HinLinPyin at 05:320comments
“ခွေးသတ္တ၀ါကတော့ သူ့အပါး ကျလာတဲ့ ခဲလုံးကိုသာ ဒေါသတကြီးလိုက်လံ ကိုက်ခဲတယ်။”ခြင်္သေ့နဲ့ ခွေးသတ္တ၀ါမကွာလား ?
မြန်မာပြည်သူတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရတဲ့ ပင်မအကြောင်းခံတရားဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ၂၀၀၇-စက်တင်ဘာ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးကတဆင့် ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတွေက ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြတယ်။ ရလဒ်ဆိုးကျိုးကို ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး တွေ့ဆုံဆွေး နွေး အဖြေရှာရေးကတဆင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆီ ခရီးနှင်ဖို့လည်း အမြော်အမြင်ရှိစွာ တောင်းဆို ခဲ့ကြတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို ဥပက္ခာပြုခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ နိုင်ငံရေးအရ ခံစစ်ဘ၀ကို လုံးလုံးကျရောက်နေရပြီ။ စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပြီး အပိုင် ကျဆုံးတဲ့အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြရလိမ့်ဦးမယ်။
အမှန်နဲ့အမှားရဲ့အားပြိုင်ပွဲမှာ အဆုံးတနေ့ အမှန်ကသာ အောင်ပွဲခံရမှာပဲ။ ဒါဟာ ရှောင်လွဲ မရတဲ့ နိယာမဧကန်သဘောဖြစ်တယ်။ တချိန်တည်းမှာဘဲ တပွဲချင်းနဲ့ ရေတိုသဘောမှာတော့ ပြိုင်ဘက်ထက်သာ လွန်တဲ့ လူထုအင်အားကို မစုစည်းနိုင်ရင် ယာယီအရေးမသာမှုတွေ တွေ့ရ မြဲဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် အမှန်တရားရဲ့ အဆုံးတနေ့အောင်မြင်ရမှု။ ယာယီအရေးနိမ့်ရမှုနဲ့ အမှား တရားရဲ့ ယာယီအောင်မြင်မှု။ အဆုံးတနေ့မှာရှုံးနိမ့်ရမှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ လက်တွေကျကျ ဆင်ခြင်ကြည့်မြင်ကြဖို့လို တယ်။ အကောင်အထည်မဲ့ ယုံကြည်မှုသက်သက် တခုတည်းနဲ့တော့ အမှန်တရားရဲ့အောင်ပွဲကို ဆုပ်ဆုပ်ကိုင် ကိုင် ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က မှန်နေပါ လျက်နဲ့ ဘာကြောင့် အရေးနိမ့်ရသလဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်က မှားနေပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် အရေးသာသွားရသလဲ ဆိုတာတွေကို မှန်ကန်စွာနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲရဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကိုလည်း မှန်ကန်စွာနိဂုံးချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအခါမျိုးမှာ မမြင်ရတဲ့ ကံတရားဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်လာတတ်ပြီး ကိုယ့်အချင်းချင်းကဲ့ရဲ့သင်္ဂြိုလ် အတင်းဆိုမှုတွေနဲ့ ညီညွတ်ရေး ထိခိုက်မှုဆီ ဦးတည်သွားတတ်ကြတယ်။
တကယ်တော့ အမှန်တရားဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကင်းလွတ်တည်ရှိနေတာ မဟုတ် ဘူး။ ကျနော့်တို့ ပြောဆိုနေတဲ့ အမှန်တရားဆိုတာ အဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ ဘ၀တိုက်ပွဲအတွင်း က အတွေ့အကြုံအဆက် ဆက်ကို စုစည်းပေါင်းချုပ်ထားတဲ့ အကောင်အထည်မဲ့ တန်ဖိုးသဘောတရားတခုပဲ။ ပြည်သူတွေအတွက် မှန်ကန် တဲ့တန်ဖိုး သဘောတရားတခုဟာ ဖိနှိပ် အုပ်စိုးသူ အဓမ္မ၀ါဒီတွေအတွက်တော့ အမှားတရားသာဖြစ် တယ်။ ပြည်သူတွေက ဖိနှိပ်မှု အောက်က လွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်တာကို မှန်တယ်လို့ယုံကြည် ပေမဲ့ ဖိနှိပ် အုပ်စိုးသူတွေကတော့ အဲဒါကိုဆူပူအုကြွမှု မင်းမဲ့လုပ်ရပ်လို့မြင်တယ်။ လူထုအုကြွမှုကို အကြမ်း ဖက်ဖြိုခွဲတဲ့ သူတို့လုပ်ရပ်ကို တရားတယ်လို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမျိုးတိုင်း တန်းတူသွေးစည်း ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေအဖြစ် လက်နက် အားကိုး ဖြိုခွဲကြတာဖြစ်တယ်။
တရားဆိုတာ အကောင်အထည်မဲ့သဘောပဲ။ အမှန်တရားတခုဟာ မှန်နေပေမဲ့ အခိုင် အမာအကောင်အထည်ဖြစ်လာအောင် အသက်မသွင်းနိုင်ရင် သူရဲ့မှန်ကန်မှုနဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ခွန်အားကို မပြနိုင်ဘူး။ စိတ်ကူးပုံပြင်ထဲက တန်ခိုးရှင်ထက် ဘာမှမလိုဘူး။ ဖိနိုပ်မှုအောက်က လွတ်မြောက်လိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ဘ၀တိုက်ပွဲ များစွာအတွင်းက စုစည်းပေါင်းချုပ် ချက် အကောင်အထည်မဲ့ အမှန်တရား ကို အကောင်အထည်ဖြစ်လာအောင် လက်တွေ့နဲ့ အသိရှိရှိပေါင်းစပ်ကြရမြဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါကျမှသာ အကောင်အထည်မဲ့ အမှန်တရား ၀ိဥာဉ်ဟာ အခိုင်အမာကိုယ်ထည် ဖြစ်တည်လာပြီး အံ့မခန်းတဲ့တိုက်ပွဲဝင် အင်အားကြီးအဖြစ် အသက်ဝင် ရုန်းကြွလာတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ များစွာက သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီ။
အားပြိုင်ပွဲတခုအတွင်းမှာ ပေါင်းစည်းနေတဲ့ ဘက်နှစ်ဘက်ဟာ နှစ်ဘက်စလုံးက အနိုင်ရချင် ကြသလို။ နှစ်ဘက်စလုံးကပဲ အရှုံးမပေးလိုကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခိုင်အမာအားပြိုင်မှုဆိုတာ ကာလအကန့်အသတ်မဲ့ မဟုတ် ဘူး။ ကာလအကန့်အသတ်ဆုံမှတ်တခု ရောက်ရင်တဘက် ကရှုံးပြီး။ တဘက်ကနိုင်ရမှာပဲ။
အာဏာလက်ရှိ အဓမ္မ၀ါဒီ နအဖစစ်အုပ်စုဟာ အာဏာကိုအသုံးပြုပြီး ပြည်သူကိုဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်ဖို့ စစ်တပ်၊ ပုလိပ်၊ တရားရုံး၊ အကျဉ်းထောင် စတဲ့ဖိနှိပ်ရေးယနျွှရားတွေကို အသင် ထူထောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြည်သူဖိနှိပ်ရေးပေါ်လစီတွေကို အသက်ဝင်လှုပ်ရှား လာအောင် အခိုင်အမာစည်းရုံးဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လည်း အဓမ္မ၀ါဒီစစ်အုပ်စုဟာ ပြည်သူဖိနှိပ်ရေးအတွက် အခိုင်အမာ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပြည်သူ တွေထက်သာလွန်ပြီး လက်ဦးမှုရယူနိုင်ကြတာပဲ။ ဒီလိုလက်ဦးမှုရယူနိုင်လို့ လည်း တပွဲချင်းမှာ အသာရသွားကြတာဖြစ်တယ်။ တခွန်းတည်းပြောရရင် လက်ဦးမှုဆိုတာ တပွဲချင်းအရ အာဏာ ရနေသူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။
ဓမ္မတာပဲ ရှည်ကြာတဲ့ လူထုတိုက်ပွကြီးအတွင်းက ထွက်ပေါ်လာတဲ့။ သက်ဆိုင်ရာ လူတန်းစား။ လူ့အလွှာ အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ ဥပဒေတွင်း။ ဥပဒေပနိုင်ငံရေးပါတီများ တက်ကြွတဲ့တိုက်ပွဲဝင် အစုအဖွဲ့များ။ တကိုယ်တော်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများစတဲ့ ပြည်သူ့ဘက်တော်သားများ က ကိုယ်နိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းပြီး ပြင်ဆင်ကြရမှာပဲ။
လျို့ဝှက်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲက အခြေခံကျတဲ့အချက်အချို့ကို အကြမ်းဖျင်း တင်ပြရရင် လျို့ဝှက် ခေါင်းဆောင်မှုအောက်ရှိ လိုင်းအသီးသီးဟာ အလုပ်သမား၊ လယ်သ မား၊ ကျောင်းသား၊ ရဟန်းသံဃာ၊ အမှုထမ်း၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်စတဲ့ လူထု လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးအတွင်းက တက်ကြွသူအမာခံများကို မွေးမြူစုစည်းတာ။ တက်ကြွ သူအမာခံတွေကို အခြေခံပြီး လူတန်းစား။ လူ့အလွှာ အလိုက် သမဂ္ဂတွေဖွဲ့စည်းတာ။ စစ်တပ်။ ရဲ၊ ကြံဖွံ့၊ မီးသတ်၊ ကြက်ခြေနီစတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ တွေထဲမှာ ‘လူထုတိုက်ပွဲ ထောက်ခံရေး’ အင်အားစုတွေ လျို့ဝှက်စုစည်းတာပါပဲ။ အနိမ့်ဆုံး အားဖြင့် ကြားနေအင်အားစုများ ရှိလာအောင် လုပ်ရေးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပြင်ဆင်ထားနိုင်မှ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သမဂ္ဂ တွေ၊ လူထုတိုက်ပွဲ ထောက်ခံရေးအစုတွေကို မဏ္ဏိုင်ပြုပြီး တောရောမြို့ပါမကျန် လူထု ပါဝင်လာရေး ဖြစ်နိုင် စရာရှိတယ်၊ အထွေထွေသပိတ်ကြီးအဖြစ် အချိန်တိုအတွင်း ကူးပြောင်း နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လက်ဦးမှု ကိုလျင်မြန် စွာတိုးချဲ့ပြီး အဆုံးအဖြတ်ကျချိန်အထိဆုပ် ကိုင်ထားနိုင် မှာ ဖြစ်တယ်။
သင့်လျော်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲ တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာမှ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အ စည်းတွေကို အရေးပေါ် ဖွဲ့စည်းရတာမျိုးဟာ တိုက်ပွဲလိုအပ်ချက်ကို အချိန်မီဖြည့်ဆီးနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ အထွေထွေ သပိတ် ကြီးအဖြစ် အချိန်တို အတွင်း ကူးပြောင်းနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ခက် တယ်။
ဒီလိုပြောလို့ အလုံးစုံပြင်ပြီးမှ တိုက်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ လူထုတိုက်ပွဲဆို တာ အင်မတန် ကျယ်ပြန့် ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိပြီး ကိုယ်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသလို ဖြစ်ချင်မှဖြစ် တတ်တာမျိုး ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အကြောင်းအချက်ပေါ်အခြေခံပြီး စတင်ပေါက် ကွဲမယ်ဆိုတာလဲ ဘယ်သူမှ အတတ်သိနိုင် တာမဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင် ပြင်နိုင်သမျှပြင်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ ပြင်ဆင်ပြီးသမျှနဲ့ အားဖြည့်၊ တိုက်ပွဲ တွင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေသစ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရလည်းထပ်ပြင်။ ပြင်နေရင်း တိုက်ပွဲတိုက် ဆိုတဲ့ နည်းနဲ့ ပျော့ပြောင်းစွာ ပေါင်းစပ်ရတာမျိုးလို့ သဘောပေါက်တယ်။ ဒါကြောင့်ကြိုပြင်တာ ဟာ မပြင်တာထက်၊ နောက်ကျပြင်တာထက် အကျိုးများတာအမှန်ပဲ။
နောက်ဆက်တွဲလူထုတိုက်ပွကြီးအတွက် ပြောင်လုပ်ငန်း၊ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်း နည်းနှစ် နည်းနဲ့ ပြင်ဆင်သင့် တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီ။ ဒီနှစ်ခုဟာ အပေါ်ယံအရ လှုပ်ရှားရပုံမတူပေမဲ့ အတွင်းသဘောအရ လူထု လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်ရေး ရည်မှန်းချက်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။
တကယ်က ပြောင်လုပ်ငန်းနဲ့လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းဟာ တခုကိုတခုဆန့်ကျင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အပြန်အလှန် ထောက်ကူနေသာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဥပဒေမဲ့စစ်အာဏာရှင် စနစ် အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်း ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လေ။ ပြောင်လုပ်ငန်း အတွက် အကျိုးများလေပဲ။ အပြန်အလှန် အားဖြင့် ပြောင်လုပ်ငန်းကို မိမိရရ အသုံးချနိုင်လေ။ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းကို ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းစွာလုပ်နိုင်လေပဲ။
လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းနဲ့ ပြောင်လုပ်ငန်းဟာ အပြန်အလှန်ကူးပြောင်းတဲ့ သဘောလည်းရှိ တယ်။ တိုက်ပွဲစဉ်အတွင်း အခွင့်မသာတဲ့အခါ ပြောင်လုပ်ငန်းဟာ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းအဖြစ်ကူး ပြောင်းသွားလေ့ရှိပြီး။ အောင်ပွဲရတဲ့အခါ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းဟာ ပြောင်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကူး ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ ဒီသဘောကို အမျိုး သားလွတ်မြောက် ရေးကာလ လှုပ်ရှားမှုများနဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေတ် လူထုတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာ လေ့လာတွေ့ ရှိနိုင်တယ်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာအရေးတော်ပုံကြီး အတွင်းမှာလည်း သံဃာနဲ့ကျောင်းသားများဟာ တိုက်ပွဲလိုအပ် ချက်အရ ပြောင်လုပ်ငန်းနဲ့ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်း အကြားအဆက်အစပ်ကို အပြန်အလှန်ကူးပြောင်း လှုပ်ရှား ခဲ့ကြတာ သတိပြုလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် လုပ်နိုင် တာဟာ လူထုတိုက်ပွဲအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်တင်ဘာအရေး တော်ပုံလှုပ်ရှားမှုမှာ ပြောင်လုပ်ငန်းသဘောက အဓိက လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ဒီထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လျို့ဝှက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့သာ ကြိုပြင်ထားနိုင်ခဲ့ရင် စက်တင်ဘာအရေး တော်ပုံကြီးကို ဒီထက်ပိုမိုအားဖြည့်ပေးနိုင်မှာအမှန်ပဲ။
နိဂုံးချုပ်ရရင် တပွဲချင်းအရ အာဏာကိုအသုံးချပြီး ပြည်သူအပေါ် အနိုင်ယူနေတဲ့ နအဖ စစ်အာဏာရှင် စနစ်အတွင်းမှာ မုချကျဆုံးရမယ့် အကြောင်းတရားတခုပါရှိနေတယ်။ အဲဒါ ကတော့ ပြည်သူကို ဖိနှိပ်ဆန့်ကျင် တဲ့ ရပ်တည်မှုအမှားပဲ။ အဲဒီအမှားကို အကြောင်းပြုပြီး အတွေးမှား၊ အမြင်မှား၊ အလုပ်မှားတွေကို အဆက်မ ပြတ် ကျူးလွန်ကာ နောက်ဆုံးကျဆုံး ခန်းဆီ ဦးတည်စေတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အလိုလျောက် ကျဆုံးမှာ တော့မဟုတ်ဘူး။ စည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ လူထုအားနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှ အပြီးသတ်ကျဆုံးမှာဖြစ်တယ်။
တပွဲချင်းအရ အရေးနိမ့်မှုတွေ ကြုံနေရတဲ့ ပြည်သူလူထကြီးအတွင်းမှာလည်း အဆုံး တနေ့ မုချအောင်ပွဲခံရမယ့် အကြောင်းတရားတခုရှိနေတယ်။ အဲဒါက စစ်အုပ်စုလက်တဆုပ် စာရဲ့ အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုအောက်က ပြည်သူ တရပ်လုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဆင် ရေးဆိုတဲ့ ရပ်တည်မှုအမှန်တရား ပဲ။ ဒီရပ်တည်မှုအမှန်တရားကို အကြောင်းခံပြီး ပြည်သူတွေ ဟာ အတွေးမှန်။ အမြင်မှန်။ လုပ်နည်းမှန် တွေကို ရရှိပြီး တပွဲချင်းအရေးနိမ့်မှုက အောင်မြင်မှုကို တက်လှမ်းလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ လက်ဦးမှုမဲ့ရာက ရှိရာသို့ အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့ပြီး အောင် ပွဲကို အရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
တသက်စာ အမှားဝန်ထုပ်ကြီးကို မချိမဆန့်ပိုးထားတဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စုကို အမှန်တရား အရ အားကောင်းမောင်းသန်စုစည်းထားတဲ့ ပြည်သူ့အားနဲ့တွန်းရင် စစ်အုပ်စုဘုံးဘုံးလဲ ရမှာပဲ။ ဒီအတွက်လိုအပ် သမျှကို ၀ိုင်းဝန်း ပြင်ဆင်ရင်း လာမယ့်တိုက်ပွကြီးကို ကြိုကြဦးစို့။
Posted by HinLinPyin at 05:290comments